सकारात्मक र नकारात्मक गुणहरू को सूची। गुण
जन्म देखि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय, यसको आफ्नै वर्ण endowed। बच्चा कसैले उनि एक ठूलो हदसम्म आफूलाई प्रकट, आमाबाबुको केही गुण हकदार हुन सक्छ, र कसैले परिवार मा अरू कसैलाई जस्तो देखिदैन। तर वर्ण - यो बच्चा मा अनुमान आमाबाबुको व्यवहार, छ, यो एक थप जटिल मानसिक घटना हो। सकारात्मक र एक सूची मानिसको नकारात्मक गुणहरू धेरै ठूलो छ। यस लेखमा वर्ण को मुख्य विशेषताहरु हाइलाइट गर्न प्रयास गर्नेछ।
को प्रकृति कस्तो छ मानिस?
ग्रीक शब्द "वर्ण" बाट अनुवादित अर्थ "साइन को एक विशिष्ट सुविधा।" मान्छे को आफ्नो मनोवैज्ञानिक संगठन प्रकार मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो प्राण जीवनसाथी पाउन सम्बन्ध निर्माण गर्न, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन निर्माण। मानिसको प्रकृति - मनोवैज्ञानिक विशेषताहरु, व्यक्तित्व लक्षण मानव जीवनको विभिन्न पक्षमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह र यसको गतिविधिहरु मार्फत प्रकट गर्दै छन् को एक अद्वितीय सेट।
व्यक्तिगत को प्रकृति बुझ्न, यो एन सामूहिक यसको कार्यहरू विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। आफ्नो हृदय उत्प्रेरित रूपमा सबैलाई कार्य किनभने स्वभाव बारे इन्साफ, धेरै आत्मपुरक हुन सक्छ। तथापि, लामो समय को व्यवहार अध्ययन, सकेसम्म व्यक्तिगत प्रतिरोधी गुण पहिचान गर्न। विभिन्न परिस्थितिमा एक व्यक्ति, एउटै निर्णय लिन्छ भने समान निष्कर्ष बनाउँछ र यस्तै प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ, यो बदलिने सुविधाहरू त्यहाँ थियो भने छ। उदाहरणका लागि, कसैले जिम्मेवार छ भने, काम मा र घर मा दुवै आफ्नो व्यवहार यो मापदण्ड फिट हुनेछ। एक व्यक्ति प्रकृति द्वारा हँसिलो हो भने, सामान्य सकारात्मक व्यवहार विरुद्ध शोक को एक समय प्रदर्शन छुट्टै विशेषता छैन।
वर्ण गठन प्रक्रिया आमाबाबुले संग बच्चा को पहिलो सामाजिक सम्पर्कमा प्रारम्भिक बाल्यकाल मा सुरु हुन्छ। उदाहरणका लागि, अत्यधिक प्रेम र guardianship मानव psyche एक दिगो विशेषताहरु मा भविष्यमा गर्न प्रमुख हुन र यसलाई गैर-आत्म वा खराब बनाउन सक्छ। किन धेरै आमाबाबुले छोराछोरीलाई सकारात्मक गुण को शिक्षा गर्न विशेष ध्यान हो भन्ने छ। तिनीहरूले बच्चा गर्न जनावर, एक जिम्मेवारी महसुस गर्न सक्छ, सानातिना घरधन्दा प्रदर्शन आफ्नो खिलौने सफा र सबै चाहना र whims पूरा गर्न सकिन्छ कि भनेर व्याख्या गर्न सिक्न यो निर्देशन नेतृत्व।
एक किंडरगार्टन र एक स्कूल बन्ने अर्को चरण। बच्चा पहिले नै आधारभूत गुण राखे छ, तर यो चरण मा उनि सुधार गर्न उत्तरदायी हो: यो, लोभ एउटा सानो व्यक्ति निको पार्न अत्यधिक लजाउने हटाउन मदत गर्न सम्भव छ। पछि, नियम, गुण को गठन र परिवर्तन मात्र सम्भव गर्दा मनोवैज्ञानिक काम छ।
वर्ण वा स्वभाव?
अक्सर यी दुई अवधारणाहरु भ्रमित। साँच्चै, वर्ण र स्वभाव आकार मानव व्यवहार दुवै। तर तिनीहरूले मौलिक प्रकृतिका भिन्न छन्। वर्ण - प्राप्त मानसिक गुण को सूची, स्वभाव एक जैविक मूल छ, जबकि। एक र एउटै स्वभाव संग, मान्छे धेरै फरक वर्ण हुन सक्छ।
impetuous र बाँणशैली choleric, phlegmatic unhurried र unruffled, प्रकाश र आशावादी आशावादी melancholic र भावनात्मक कमजोर: त्यहाँ स्वभाव को4प्रकार हो। एउटै स्वभाव मा केही गुण बाधित गर्न सक्नुहुन्छ, र विपरित, वर्ण स्वभाव क्षतिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, phlegmatic, हास्य को एक राम्रो अर्थमा छ, यो भावना को प्रदर्शनहरूमा stingy हुन जारी हुनेछ, तर यो हास्य को एक अर्थमा देखाउन हाँस्न र सम्बन्धित समाजमा रमाइलो उहाँलाई रोक्न छैन।
सकारात्मक मानव गुणहरू सूची
मानिसको सकारात्मक र नकारात्मक गुणहरू को सूची विशाल छ। सुरुमा, मानिस, आफ्नो व्यवहार को प्रकृति र सार सन्दर्भमा सबै परिभाषा - आत्मपुरक। समाज भनेर सकारात्मक वा यो नकारात्मक कसरी वा त्यो व्यक्तित्व विशेषता वा कार्य निर्धारण गर्न अनुमति निश्चित नियम छ। तर, आफ्नो सद्गुण र राम्रो मनसाय देखाउन एक व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता छन्। निम्नानुसार सूची देखिन्छ:
प्रतिज्ञा को पूरा;
लगनशील भई लागिरहेमा;
निस्वार्थ भाव र अरूलाई।
यी गुणहरू, आफ्नो डेरिवेटिव संग, मानव प्रकृति को साँचो सौन्दर्य प्रकृति गठन। तिनीहरूले परिवार र सन्तानको लालनपालनमा राखे आमाबाबुको व्यवहार प्रतिलिपि, तर किनभने राम्रो-शिक्षित व्यक्ति यी सबै उच्च गुणवत्ता हुनेछ।
नकारात्मक मानव गुणहरू सूची
मानिसको सकारात्मक र नकारात्मक गुणहरू एक सूची तिनीहरूलाई धेरै पछि, एक लामो समय को लागि गठन गर्न सकिन्छ। आफ्नो कार्य वा कार्यहरू मध्ये एक मात्र आधार मा वर्ण को नकारात्मक गुणहरू उपस्थिति एक व्यक्ति नियुक्त गर्न मौलिक गलत हुनेछ। तपाईं पनि सबैभन्दा शिक्षित र, ट्याग रचनाहरू सक्दैन भद्र मान्छे वास्तवमा तिनीहरू हकदार गर्न, भन्नु, लोभ र घमण्ड छन् भनेर विश्वास गर्न सक्छ। तर, यदि यो व्यवहार - व्यवस्था छ, त्यसपछि निष्कर्षमा स्पष्ट छ।
नकारात्मक गुण, सकारात्मक र भारी दुवै को सूची। निम्नानुसार सबैभन्दा आधारभूत र साधारण हो:
अरुको अहित गर्ने इच्छा;
लोभ र अरूलाई।
मानिसहरूलाई यी गुण उपस्थिति - यो निदान, तिनीहरूले हुन छ सक्दैन र, पनि वयस्क, कारण को उमेर मा लडे हुनुपर्छ व्यवहार सच्याउन।
कि अरूलाई सम्बन्ध देखा गुण
मानिसको सकारात्मक र नकारात्मक गुणहरू को सूची, हामी गठन गरेको छ। अब हामी आफूलाई अरूको को सम्बन्ध मा प्रकट कि गुण केन्द्रित हुनेछ। तथ्यलाई छ, त्यसको आधारमा कि, सम्बन्ध मा कसलाई वा के एक व्यक्ति एक कार्य वा विशेष व्यक्तिगत विशेषता आकर्षित गर्ने कार्य commits गर्न। समाजमा यसलाई निम्न गुणहरू देखाउन सक्छौं:
अरूको मनोभावहरू गर्न संवेदनशीलता;
अलग, र अन्य।
निस्सन्देह, धेरै व्यक्ति पनि सबैभन्दा खुला र Communicative व्यक्ति एक सख्त, बन्द र heartless व्यक्ति सञ्चार समस्या अनुभव गर्न सक्छ भन्ने थियो जसमा अवस्थामा निर्भर गर्दछ। तर नियम, भद्र मान्छे, सकारात्मक गुणहरू संग endowed, समाज भिज्न र कठिनाई बिना आफ्नो नकारात्मक सुविधाहरू दबाउन।
कि आफ्नो काम देखा गुण
मानव क्यारियर निर्माण आफ्नो चरित्र गुणस्तर निर्भर गर्दछ। पनि सबैभन्दा प्रतिभाशाली र भेंट मान्छे कारण वास्तवमा गर्न असफल हुन सक्छ तिनीहरूले आफ्नो काम र प्रतिभा एउटा जिम्मेवार मनोवृत्ति छैनन् भनेर। यसरी, तिनीहरूले मात्र आफूलाई चोट र आफैलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता को संभावना दिन छैन।
अथवा, त्यसको विपरीत, त्यहाँ अवस्थामा प्रतिभा को कमी काममा विशेष परिश्रम द्वारा अफसेट भन्दा बढी छ जहाँ छन्। जिम्मेवार र सुग्घर व्यक्ति सधैं सफल। यहाँ मुख्य पात्र को एक सूची छ:
passivity र अरूलाई।
यी दुई त मान्छे बीच काम र संचार रूपमा, सक्रिय प्रत्येक अन्य साधारण लक्षण को समूह लिङ्क सँगसँगै छ।
गुण आफूलाई को सम्बन्ध मा प्रकट गर्दै
यी यस्तै छ भनेर सुविधाहरू छन् एक व्यक्तिको भावना , आफ्नो आत्म-छवि आफूलाई तिर। निम्नानुसार उनि:
मर्यादा वा श्रेष्ठता;
आत्म-adoration र अरूलाई।
गुण कुराहरू सम्बन्ध आफूलाई प्रकट
कुराहरू सम्बन्ध मानव सामाजिक सम्बन्ध को पङ्क्तिबद्ध असर गर्दैन, तर देखाउनुहुन्छ र सबै भन्दा राम्रो र यसको भद्दा प्रकृति गुणस्तर प्रकट गर्छ। यसलाई जस्ता सुविधाहरू छ:
slovenliness र अरूलाई।
Mentality, रूसी मान्छे गुणस्तर
Mentality - अवधारणा धेरै आत्मपुरक छ, र यो stereotypical सोचाइ आधारमा आधारित छ। तथापि, यो कि अकाट्य छ वा त्यो राष्ट्रियता केही सुविधाहरू छ। रूसी मानिसहरू न्यानोपन र आतिथ्य, खुसीसाथ स्वभाव लागि प्रख्यात छन्। रूस मुड को प्रभाव अन्तर्गत पर्न, आफ्नो तर्कसंगत र तार्किक व्यवहार भिन्न छैन किनभने अक्सर संसारमा रूसी प्रति व्यक्ति, एक रहस्यमय र अबोध्य मानिन्छ।
रूसी मान्छे अर्को सुविधा - sentimentality। रूसी मानिस तुरुन्तै अन्य को भावना माथि लिन्छ र सधैं आफ्नो भावना, लाभ को विकल्प हालतमा साझेदारी गर्न तयार छ। हामी अन्य गुण बारे भन्न सक्दैन - दया। ऐतिहासिक, रूस देश को सबै सीमाना मा आफ्नो छिमेकी मदत गरेको छ, र आज मात्र एक heartless व्यक्ति अर्को विपत्ति द्वारा पारित हुनेछ।
मानिस-daffodils: कसरी के आधार मा बीच, भेद गर्न? Narcissism - रोग वा शिक्षा को एक परिणाम?
संचार को Communicative पक्ष
राज्य को आर्थिक नीति
भौतिक बिन्दुको किनेमैटिक्स: मूल अवधारणाहरू, तत्वहरू
एक "स्काइप" कसरी बनाउने? विस्तृत विश्लेषण
"शरद Cannibalism": साल्भाडोर Dali र स्पेनिश नागरिक युद्ध
छोराछोरीको ठेउला लक्षण: एक अप्रिय खुजली र भद्दा बुलबुले
राजनीतिक शासन के हो? अवधारणा र लोकतन्त्र र autocracy को प्रकार
मास्को को कुलीन जिल्लामा: र्याङ्किङ्ग
औषधि बच्चाहरु को लागि "Mukaltin"। प्रयोगको लागि निर्देशन
एक ब्लेंडर मा धुंधला। Smoothies: फोटो, व्यञ्जनहरु
घर्षण असर: लेबलिंग
अगाडि-बाइक: समीक्षा, लामबद्ध। लोकप्रिय मोडेल